စစ်မှန်သောအချစ်…….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စစ်မှန်သောအချစ်……..
Posted by Khaing Khaing on May 17, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
ယနေ့မှစ နှစ် ၁၀၀ တိုင် အချစ်..........
အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ ခဏတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်သလို ခဏတာပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ် ….. တစ်ခါတစ်လေကျပြန်တော့လည်း ခဏတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချစ်က တသက်တာချစ်သွားခဲ့မိတာတွေ လည်းရှိပါတယ် …….. လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ချစ်ပုံကြိုက်ပုံ ခံစားချက်ခြင်းမတူညီကြပါဘူး ချစ်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုကြတာများပါတယ် …….. အဲဒီအချိန်မှာလည်း အချစ်ကိုနားလည်အောင် သင်ယူသင့်ပါတယ် …… ကိုယ်ကလူတစ်ယောက်ကို စချစ်ချစ်ခြင်းသူ့အကြောင်းကို အစုံသိချင်မှ သိမယ် သူ့အကြောင်းအရင်သိပြီးမှချစ်တာလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ကိုယ့်ဘ၀အတွက်လက်တွဲဖော်လို့ သတ်မှတ်ပြီးရင်တော့ သူဘာကြိုက်တတ်သလဲ ကိုယ်ဘာကြိုက်လဲဆိုတာ အပြန်အလှန်သိအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ် သူ့အကြိုက်ကိုလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ် …… တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ခက်သား သူ့အကြိုက်ဟာ ကိုယ်မလိုက်နိုင်တဲ့အခါ အဲလိုလူမျိုးကိုလမ်းခွဲဖို့ ၀န်မလေးသင့်ဘူး အဲဒါအချစ်ကို နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲ ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာပါ ……..
တွယ်တာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဠီကာ ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀မှာ ချစ်ကြိုက်မိကြတယ် ……. အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားဘ၀ဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် အဲဒီအချိန်ဟာ ကျီးကောင်ပေါက်စအရွယ်လို့ပြောရမလား မလှတလှ အလှသွေးဝင် ချိန်ပေါ့ တွယ်တာက ရိုးတယ် ခေတ်မဆန်ဘူး မပြင်တတ်မဆင်တတ်နဲ့ပေ့ါ … ဠီကာလည်းရိုးပါတယ် ဒါပေသည့်ဠီကာ့အတွင်း စိတ်ကခေတ်ဆန်သည် ဒါတွေကို တွယ်တာက ရိပ်မိလာခဲ့တယ် ….. တွယ်တာက အထက်တန်းအောင်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆက်တက်တယ် ဠီကာကတော့ စာမေးပွဲကျနေခဲ့ လေရဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀မှာ တွယ်တာနဲ့ဠီကာ သိပ်မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ …… တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ချိန်ဆို တွယ်တာသည် သူ့အစွမ်းအစရှိသမျှနှင့် အစွမ်းကုန်ပြင်လေ့ရှိသည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဠီကာစိတ်ကိုသိနေသဖြင့် သူမကိုပိုချစ်စေရန်အတွက်ဖြစ်သည် တွယ်တာက ဠီကာကိုသိပ်ချစ်သည် ဠီကာဘာလုပ်လုပ် တွယ်တာဘာမှမဝေဖန် သည်းခံခဲ့သည် အခြားမိန်းကလေးများကိုလည်း ရည်းစားထားတတ်သေးသည် ထိုအကြောင်းများကို တွယ်တာ့ထံ လာရောက်ပြောပြလေ့ရှိသည် တွယ်တာက စိတ်မဆိုးသည့်အပြင်ဂုဏ်တောင်ယူတတ်သေး၏ သူဘယ်လောက်ပဲပွေပွေ င့ါကိုတော့ ချစ်နေပါလားဆိုတဲ့အသိနဲ့ပေ့ါ ဒါပေသည့် လူ့စိတ်ဆိုတာ ခက်သားလား တွယ်တာက ရိုးရိုးအေးအေးနေသည့် မိန်းကလေး…. ဠီကာက ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ပွေရှုပ်အလှမက်လာလေသည် ထိုဒဏ်ကိုတွယ်တာမခံနိုင် တွယ်တာက ခေတ်မဆန် ဠီကာကိုယ်တိုင်ကလည်း တွယ်တာအပေါ်တွင် သိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့ နောက်ဆုံး တွယ်တာက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချလိုက်သည် ဠီကာနှင့်လမ်းခွဲလိုက်တော့သည် …… အမှန်ကား မချစ်လို့တော့မဟုတ် မဖြစ်နိုင်တော့သောကြောင့်သာဖြစ်သည် … ဠီကာကို ဆက်ချစ်နေလျှင်သူမ ဘ၀သာ အချိန်တွေကုန်သွားမည် နံမည်ပျက်မည် ဠီကာက သူမကို လက်ထပ်ယူမည် မဟုတ်ကြောင်းကို သိသောကြောင့် လမ်းခွဲခဲ့သည် ……..
ဒီလိုနှင့် ဠီကာနှင့်လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း တွယ်တာ မည်သည့်ယောက်ျားလေးအချစ်ကိုမျှမယုံကြည် တော့ပေ ယောက်ျားလေးမှန်သမျှ သူမကို အပျော်သဘောသာ ချစ်သည်ဟု ခံယူချက်ထားကာ စိတ္တဇ၀င်ခဲ့လေသည် သူမကို ချစ်သောယောက်ျားလေးများကိုလည်း သူမကိုယ်တိုင် ဠီကာလောက်မည်သို့မျှ စိတ်ဝင်စားလို့မရဟုထင်ခဲ့သည် ………… တွယ်တာဘုရားမှာ အမြဲဆုတောင်းတာတစ်ခုရှိတယ် “စစ်မှန်သော ဖူးစာရှင်နဲ့တွေ့ရပါလို၏ ဘုရားလို့” နေ့စဉ်ဘုရားဝတ်ပြုတိုင်းဆုတောင်းခဲ့တယ် ……..
အချိန်တွေကြာလာသည်နှင့်အမျှ တွယ်တာလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးစုံတွင်ကျင်လည်လာခဲ့လေသည် တွယ်တာအသက် (၂၄) နှစ်မှာ တွယ်တာဆုတောင်းပြည့်ဖို့အတွက် မထင်မှတ်ပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့သည် ထိုကောင်လေးသည် တွယ်တာထက်တော့အသက်ငယ်မည်ထင် …. တွယ်တာသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသည် အဆန်းတော့အဆန်းသား ဒါပေသည့် သူမနှလုံးသားကို သူမဆုံးမခဲ့သည် မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့ ……… ကောင်လေးက တွယ်တာ့ကိုသိပ်ချစ်သည် တွယ်တာကတော့ သူမရဲ့စိတ္တဇအတိုင်း မည်သည့်ယောကျားလေးကိုမျှမယုံကြည် …. သို့ပေသည် အချစ်စစ် မေတ္တာစစ်လျှင် သကြားမင်းဖျက်လျှင်တောင် ပျက်ရိုးထိုးစံမရှိပါဆိုသည့် စကားလဲအရှိသားလား …..တွယ်တာနှင့် ကောင်လေး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ……. သူမမနှစ်သက်သော အပြုအမူတွေ သူမခံစားချက်တွေကို ကောင်လေးကို ပြောခဲ့သည်……… ကောင်လေးကလည်း တွယ်တာမည်သို့ဖြစ်နေပါစေ လက်ထပ်ပြီး သက်ဆုံးတိုင် လက်တွဲသွားပါမည်ဟု ဘုရားတွင် သစ္စာဆိုကတိပေးခဲ့သည် …….. (စကားပုံတစ်ခုထဲကလိုပေ့ါ မိန်းမဆိုလိမ်မှ ရည်းစားဆိုကျိန်မှဆိုသလို ) တွယ်တာ ကောင်လေးကို အလွန်ပဲ ယုံကြည်သွားခဲ့သည် ….. တွယ်တာသည် ရုပ်ဆိုးသည် သ၀န်တိုတတ်သည် ၀မ်းနည်းလွယ်သည် စိတ်ကောက်တတ်သည် သူမ၏ ကောင်လေးသည် သူမမလွဲလျှင် မည်သည့်မိန်းကလေးကိုမှ စိတ်မ၀င်စားဟု တွယ်တာ့ကိုပြောသည် တွယ်တာစိတ်ထဲတွင်လည်း ထိုကောင်လေးကိုအလွန်ချစ်သည် သူမကိုမယူလည်း ဒီတသက် အပျိုကြီးလုပ်သွားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာ မျက်လုံးစုံမှိတ်ချစ်ခဲ့သည် အတူသွားလာစဉ်မှာလဲ သူမအမြဲအကဲခတ်သည် ကောင်လေးသည် အခြားမိန်းကလေးများကို ဘယ်တော့မှ မကြည့် …… သူမကိုလည်းအလွန်ကြင်နာသည် သူမ သနပ်ခါးများကို ပဲဟင်းအိုးမှောက်သလိုလိမ်းထားလျှင် ကောင်လေးက တစ်သျှူးနှင့်လှပအောင် ဖျက်ပေးလေ့ရှိသည် တွယ်တာ့ကျန်းမာရေးကိုအလွန်ဂရုစိုက်သည် နေ့စဉ်တွယ်တာထံဖုန်းဆက်သည် တွယ်တာသည် ကောင်လေးခွဲသွားမှာကို အလွန်စိုးရိမ်ပြီး မျက်ရည်များကျခဲ့တာအကြိမ်မနည်း ကောင်လေးက အဲဒီအချိန်တွေဆို “အပြာရောင် အချစ်ည ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ တွယ်တာကို အမြဲအားပေးခဲ့သည် ….. တွယ်တာအလွန်ပဲပျော်ရွင်သာယာမိသည် မေတ္တာဆိုတာအသွား အပြန်ရှိတယ်ဆိုတာကို တွယ်တာယုံကြည်လာသည် …… နောက်ဆုံးတွယ်တာနှင့်ကောင်လေး ဘ၀တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည် ……. ကောင်လေးသည် အပြောနှင့်အလုပ်ညီသည် တွယ်တာနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည့်တိုင် တွယ်တာ့အပေါ်တွင် လွန်စွာကြင်နာသည် ……တွယ်တာ့ဘ၀တွင် အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် အလွန်ပင်ကျေနပ်ပျော်ရွင်မိပါသည် တွယ်တာလည်း ကောင်လေးအပေါ်တွင် ဘ၀တစ်သက်လုံးမေတ္တာစစ် အချစ်စစ်တွေနှင့် ချစ်သွားပြီး ပေးဆပ်သွားမည်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိပါသည် …………..
ဒီပို့စ်လေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က မိမိဘ၀လက်တွဲဖော်ကို ထိုသူရဲ့စိတ်နဲ့ အများကြီးမဟုတ်တောင် အချို့အချက်တွေ ထပ်တူကျမှသာ ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း ….. ရွေးချယ်ပြီး သူမှာလည်း မိမိစိတ်နှင့် ထပ်တူမကျဟုထင်မြင်ခဲ့ပါက လမ်းခွဲရန် ၀န်မလေးသင့်ကြောင်း ရည်ရွယ်ခြင်းပါ …….. အခြားသူများနှင့် အမြင်မတူတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ် …….. ကျွန်မရဲ့အမြင်ကလေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ………
ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်သူနဲ့ မှ မတူရင် မတူနိုင်ပေမဲ့
သဂျီးနဲ့ တော့ တူတယ်
အဖြေတောင်းပြီးချစ်ခွင့်ပန်တာမယုံမှာစိုးလို့ လျို့ ဝှက်ရမယ့်ဒိုင်ယာယီကိုသာ
မမအေးကေကေရေ ……… အဲဒီအချစ်ကို အုံပုန်းအချစ်လို့ဆိုရမလားပဲ ……… အဲဒါမျိုးအချစ်ကို တော့ အချစ်စစ်လား ဘာလားဆိုတာတော့ ညီမမဝေခွဲတတ်ဘူး …………
ပထမဆုံး ကွန့်မန့်ဝင်ပေးဖို့ အားရပါးရရိုက်လိုက်တာ… ပေးမယ်လည်း လုပ်ရော
ကွန်ပျူတာက error ဖြစ်သွားရော…။ ဆရာမင်းလူပြောတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်ဗျာ
မိန်းမတွေက အချစ်ဦးကို အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိ မမေ့ဘူးတဲ့ဗျ…။ ဒီပုံပြင်လေးက စာရေးသူ
မမလေးရဲ့ ကိုယ့်တွေ့ ပုံပြင်တစ်ခုလို့ထင်ပါဒယ်… ဒါကြောင့် ကျနော့် မိဘများကလည်း
ကိုယ်ချစ်ကို မရှာနဲ့ သူချစ်ကိုရှာတဲ့…. နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ အတ္တတွေပိုများနေလို့
မှားတတ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း မျှတစွာ တွေးထားလို့
ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ပြီး ကံကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့
တွယ်တာကို ကွယ်ရာကနေပဲ ကိုရင် မုဒိတာပွားနေမိပါတယ်…
ကိုရင်စည်ဠီကာ (ဘုံဆိုင်မှ မန်းကျည်းစည်လီကာ သိပ်ကြိုက်ခဲ့လို့ပါဗျာ)
ကိုရင်စည်ရေ …… မိန်းမတွေက အချစ်ဦးကို အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိ မမေ့ဘူးဆိုတာ တစ်ခြားလူ တွေအတွက်ဆိုရင် မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ် တွယ်တာအတွက်ကတော့မှားနေပါတယ် …. တွယ် တာက သူ့ရဲ့အချစ်ဦးက ရက်စက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ကို အလူးအလဲကိုခံခဲ့ရတာလေ …. ယခုအချိန်ထိ ဠီကာကိုမယူမိတာသိပ်မှန်တာပဲဆိုတာကို တွယ်တာသိသလို တွယ်တာ့ရဲ့ကောင်လေးလောက် ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မချစ်နိုင်တာအမှန်ပါပဲ ……… ဠီကာဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်ဘာမှမသိခဲ့တဲ့ အချိန်က စိတ်ကစားမှုတစ်ခုကြောင့်သာချစ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ ……….
သားသား မိန်းမ က သားသား ကို ဘာလို့ ရွေးတာလဲ လို့ မေးကြည့်ဖူးတယ် ။ သားသား ဘဝအတွက် သူ့ ကို အချစ်ဆုံးအဖြစ် သားသား က သူ့ ကို ရွေးမယ် လို့ သူက ယုံကြည်လို့ တဲ့ ။ အဲဒါသားသားအကြောင်းလေးပေါ့နော် ။
ဟုတ်လား သားသားပေ …….. သားသား သူ့ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတာကို ကြိုသိနေတယ်ဆိုတော့ သားသားမိန်းမက အကြားအမြင်ရတာပေ့ါနော် ……. သားသားနောက်ဆိုသတိထား ခြေလှမ်းမှား ရင်သားသားမိန်းမက သားသားကို ရိုက်လိမ့်မယ် ………. အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဟိုကောင်မလေး ရဲ့ ဒိန်ညင်းသီးအီးရူလိုက်တာကော သားသားမိန်းမသိနေလောက်ပြီ ……..
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက် ၁မျိုး ဖြစ်တဲ့ …
preference ဆိုတဲ့ စာလုံး လှလှလေးရယ်…
ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေ သိပ် မစဉ်းစားမိတဲ့ sense of humor
ဆိုတဲ့ အရည်အချင်း ရယ်… နောက်ဆုံးတခုက တော့
synergism ဆိုတဲ့အချက် ရယ်
သည်-၃ခု အလွန် အရေးပါတယ် ထင်ပါကြောင်း…။
အဲ ..၃မှတ်မှာ ၁မှတ်ပဲ ရတယ် ဆိုရင်တော့ …
မှောင်မှောင်မဲမဲ မီးဖွင့် ၀င်ဦးပေါ့ကွယ်…လေပါဒယ်
ကိုဂီရေ မနေ့ညက မီးဖွင့်ဝင်လိုက်တာ ပြန်ပိတ်ဖို့မေ့သွားလို့ ဂွဈေးမီးလောင်သွားတယ် …….. အဟိ ဒေါက်ကလက် ဒေါက်ကလက်
ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ် တွယ်တာတစ်ယောက် ချစ်ရမှာကြောက်လို့ … ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူကို ဆုံးရှုံးရတာ … နှစ်ထပ်ကွမ်းဆုံးရှုံးမှုပါပဲ … ။
ချစ်သူဘ၀မှာတော့ … ရည်စားထည်လဲ တွဲတာမျိုး ၊ အဆက်သွယ်ဖြတ်တာမျိုးက (လွယ်ပေမယ့်) စိတ်တိုင်းကျရွေးခွင့်ရှိပေမယ့် .. အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ရောက်လာလျှင် …ထိန်းသိမ်းစရာတွေပိုများပြီး (မြန်မာလူမျိုးတို့ကြား) ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် တော်ရုံပြသနာလောက်ဆို ကြိတ်မှိတ်နေတာများပါတယ် ။ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီဆိုကတည်းက .. ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုပိုင်းခြားသွားပြီလို့ မြင်မိပါတယ် … ။ အနေထိုင် အသွားလာ အပြောဆိုက စလို့ .. စိတ်ဓါတ်တွေ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ အထိပါ .. ပြင်ဆင်ရတယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။
လစ်ဗင်းတူဂဲသားတွေ ၊ စင်ဂဲလ်မားသားတွေ ပေါများတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ … ကွာရှင်းခြင်းကိစ္စကို ထမင်းစားရေသောက်လောက်ပဲ သဘောထားကြပေမယ့် … ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာတော့ကိုယ်လင်ကိုယ်မယား မပြေလည်လို့ ကွာမယ်ရှင်းမယ်ဆိုလျှင်တောင် … အပြစ်ကြီးတစ်ခု လုပ်ခဲ့မိသလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ …. ရှေ့တင်တမျိုး ၊ နောက်ကွယ်တမျိုး ..အပြောဆိုတွေခံရမှာပါ ။ ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ … မစားရအညှော်ခံ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေကိုကြောက်လို့လည်း .. ကြိတ်မှိတ်ပေါင်းသင်းနေရတဲ့ .. အိမ်ထောင်သည်ဘ၀တွေရှိတယ် … ။ ကွာရှင်းလိုက်လို့ .. မိမိခြေထောက်ပေါ် မရပ်တည်နိုင်တဲ့ မှီခိုသူ အိမ်ရှင်မများလည်း ရှိပါတယ် … ။ ဒါ့ပြင် … မိသားစုဘ၀ကို မြတ်နိုးသူ ၊ သားသမီးရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးသူမိဘများလည်းရှိပါတယ် … ထိုလူများအတွက်ကတော့ .. အဆင်မပြေတာတွေကို ဘေးချိတ် ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုကို မျိုသိပ်လို့ ..ထောက်ထားစရာတွေကြောင့် ၊ ကြိတ်မှိတ်ပေါင်းသင်းနေရသူများပေါ့ … ။ အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာဖို့ရာ ၊ ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ဖို့ရာ … အိမ်ထောင်ထိန်းသူ … အမျိုးသမီးပေါ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ မူတည်နေတယ်လို့ … ကျွန်မတော့ လက်ခံထားပါတယ် ။
ဒေါသအလျောက်ပြုမူပြောဆိုပြီး … ပြတ်စဲလိုက်ဖို့ကလွယ်ပေမယ့် .. သွေးအေးလို့ .. အမှားမြင်တဲ့အချိန် .. ပြန်ပေါင်းဖက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး … အရာရာဟာ နောက်ကျခဲ့ပါပြီ ။ ပုဂံလုံးလေးတစ်လုံး .. . လက်ကိုင်းကျိုးသွားလို့ ကော်နဲ့ ပြန်ကပ်လျှင်တောင် အက်ကြောင်းလေးတော့ ထင်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ် … ။ ဒီလိုပါပဲ .. အရာရာကို ခွင့်လွှတ်ပါမယ် ၊ နားလည်ပါမယ်ပြောပြီး ပြန်ပေါင်းလျှင်တောင် … စိတ်အခန့်မသင့်တဲ့အခါ အဖုထစ်လေးတွေ ပြန်လည် တူးဆွ မိကြမှာပါ .. ။
လင်မယားတွေ မယူခင်မှာ သေချာစဉ်းစားပြီး … ယူပြီးတဲ့အခါမှလည်း … သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်စရိုက်မတူလျှင်တောင်မှ .. နားလည် ညှိနှိုင်းတဲ့အမှု ပြုလို့ … သာယာတဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ပဲ .. ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
မမတုံ ဆွေးနွေးထားတာလေးက တကယ်ကိုကောင်းလှပါတယ် …… မခိုင်ပြောချင်တာ သမီးရည်းစားဘ၀မှာ ကိုယ့်ချစ်မိတဲ့ ရည်းစားက အဆင်မပြေခဲ့ရင် ဟိုငဲ့ဒီငဲ့မဖြတ်ရက် မပြုရက်မဖြစ်စေချင်တာပါ …… ကိုယ့်အတွက် အဓိကက ကိုယ့်စိတ်နဲ့မသင့်ရင်တော့ အဲဒီရည်းစားကို ဖြတ်ဖို့ဝန်မလေးစေချင်ဘူး ……
အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာတဲ့အချိန် အထူးသဖြင့် ရင်သွေးရလာတဲ့အချိန်တွေမှာ မမတုံ ပြောသလို စိတ်ကပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ် သားသမီးအတွက် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကမကောင်းရင်တောင် သည်းခံစိတ်တွေဖြစ်လာတယ် မိဘနှစ်ပါးကြောင့် မျက်နှာငယ်ရမယ့် သားသမီးကို မဖြစ်စေချင်ဘူး… အမပို့စ်က သမီးရည်းစားတွေကိုပဲ ရည်ညွှန်းသေးတာ အိမ်ထောင်ကျပြီးရင်တော့ မမတုံပြောသလို ထိန်းသိမ်းပြုမူနေထိုင်သွားရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ ……… နောက်ကြုံမှ ဆွေးနွေးကြတာပေ့ါ ………..
မမခိုင်ရေ သူများအကြောင်းဆိုရင်တော့ မပြောတော့ဘူးနော် ..
အဲ .. အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်မြဲအောင်စွမ်းဆောင်ဖို့ကတော့
တစ်ခါတုန်းကတဲ့ .. အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လောကီအတတ်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာကြီးတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး ယောက်ျားချစ်ဆေးဖော်ခိုင်းတယ်တဲ့ ..
ဆရာကြီးက အသက်ရှင်နေတဲ့ ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေးရရင်ဖော်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်
အဲဒီအမျိုးသမီးလည်း ယောက်ျားဇောနဲ့ တောထဲကိုနေ့တိုင်းအသားတွေယူသွားပြီး
ကျားကိုသွားကျွေးတယ်တဲ့ …. တစ်ဖြေးဖြေး ကျားနဲ့ရင်းနှီးလာပြီး
အမျိုးသမီးရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတောင် ကျားကခေါင်းတင်ပြီးအိပ်ပါသတဲ့ ..
အဲဒီလိုနဲ့ ကျားဆီက နှုတ်ခမ်းမွေးရလာပါရော ..
ဆရာကြီးကိုသွားပေးတဲ့အခါမှာ ..” သြော် … ကွယ် .. ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့ လူသားစားတဲ့ကျားကိုတောင် ရင်းနှီးချစ်ခင်အောင် လုပ်နိုင်ရင် မင်းရဲ့အမျိုးသားကို ချစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မင်းအတွက် သိပ်လွယ်မှာပါ”တဲ့ …
ဇိမ်ဖုံးဂျီးဥကိုင် ဆီမှာ ပီယဆေး ရှိတယ်ကြားပါတယ်
သူ့ကို အပိုင်ပေါင်းပြီး ဘယ်သူမှ မကြားအောင် တိုးတိုးလေး
မိုးစက်လေးပြောတဲ့ပုံပြင်လေးက ……… ပညာပေးလိုက်တာပါကွယ် …… လောကမှာ ယောက်ျားတစ်ယောကိုချစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ဘာလေးကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အညှာ(အဲလေ) လေးကိုသိဖို့လိုတယ်ကွယ့် …….. တစ်ချို့ယောက်ျားတွေက ချောတာလှတာကို ကြိုက်တယ် အဲဒီချောတာလှတာကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားတွေကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရတာ နည်းနည်းခက်တယ် …… ကိုယ်ကဘယ်လောက်လှအောင်ပြင်ပြင် သူတို့အတွင်းစိတ်က အချောအလှမြင်ရင် မနေနိုင်တတ်တဲ့လူမျိူး(ဥပမာ – မိဂီတို့လို …. ဆိုဒ်တူဂိုဒ်တူတွေဆို အငမ်းမရ မျက်စိကအရောင်ထွက် နှာခေါင်းကမီးတို့လို့ရအောင်ကိုတောက်နေသူ) ဆိုရင်တော့ ထိန်းသိမ်းရခက်တတ်တယ် …… တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေက အပြုအစုအယုအယသိပ်ကြိုက်တယ် သူ့အကြိုက်လေးလုပ်ပေးရင် သိပ်သဘောကျ …. ဘာပြောပြောတစ်ခွန်းဆိုပြီးရော …… တစ်ချို့ထက်မြက်တာကိုကြိုက်တယ် ….. တစ်ချို့က အေးဆေးတာကိုကြိုက်တယ် …….. ဒါတွေကို ကိုယ့်ဘက်ကသိနေလိုက်လုပ်ပေးနိုင်ရင် အတော်ကိုအဆင်ပြေနေတဲ့ ဘ၀ခရီးလေးဖြစ်မှာပါ …….
ခိုင်ခိုင်ရေ… အိမ်ထောင်မပြုခင်မှာ အချစ်ကို နားလည်အောင် သင်ယူရမှာလား။ ပြုပြီးမှ နားလည်အောင် သင်ယူရမှာလားဆိုတာလည်း သေချာလေး ရှင်းပြပေးပါဦး…. နည်းနာလေးများရှိရင်လည်း ပြောဦးနော်….
မမနောရေ …… အချစ်ကိုသင်ယူရမှာမဟုတ်ပါဘူး …….. အချစ်ကသင်ယူလို့မရပါဘူး ရင်ထဲကနေဖြစ်ပေါ်လာတာပါ ချစ်ပြီးမှ စိတ်ညစ်တာတွေ သည်းမခံနိုင်တောတွေက ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်မယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ် ……..ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နားလည်မှု ရအောင်ညှိနှိုင်းယူကြည့်ပါ ……. ချစ်သူဘ၀မှာ ပွင့်လင်းတာ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀အတွက် အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ……. ကိုယ့်ချစ်သူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံပါ …… စကားကျယ်ကျယ်ပြောတတ်တာကို ဟန်ဆောင်ပြီး တိုးတိုးမပြောပါနဲ့ အရင်အတိုင်းပဲပြောပါ ဒါကိုချစ်သူကမကြိုက်ရင် မကြိုက်ကြောင်းပြောတဲ့အခါ ပြင်လို့ရမှာပါ …… လိမ်လည်ဟန်ဆောင်တာတွေ ကြွားဝါတာတွေ မိမိကိုယ်အထင်ကြီးအောင်ပြောတာတွေကို ချစ်သူဘ၀မှာ မပြောမိပါစေနဲ့ တစ်ချို့က အဲဒါတွေမက်မောပြီး ချစ်နေရင် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ အထစ်အငေ့ါလေးတွေဖြစ် တတ်ပါတယ် ……… နောက်ဆုံးအိမ်ထောင်သည်ဘ၀ဖြစ်သွားရင်တော့ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ မိမိအဆင်ပြေအောင် သူ့ဆီကနေ သင်ယူစရာတွေကို သင်ယူပြီး အိမ်ရှင်မကောင်းဖြစ်အောင် ပြုမူနေထိုင်သွားရမှာပါ …….
အချစ်ဆိုတာ ပူလောင်တဲ့ မီးတောက်ငယ်တစ်ခု……ဘယ်သူမပြု မိမိအမှု စဉ်းစားကြည့်ပါအခု……မေတ္တာဟာ အေးမြတဲ့ စမ်းချောင်းငယ်တစ်ခု….. ၅၂၈ ထက်ပိုရင် ငိုပွဲတွေစု…….
တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး စိမ်းးးးးးးးးးးး ……….
စိမ်းးးးးးးးးး သမျှကို ဖျက်မယ် …….
ငါ့စိတ်ဟာ ပုပ်တယ် …….
ငါဟာလေ ငါးပုပ်ခြောက် ……….
မတူရ …….. နင့်နဲ့လက်ထပ်မယ်ကောင်မလေးဘ၀ ဖေ့ဘုတ်မှာအဖျက်ဆီးခံရတော့မယ် ဆရာထက်ကပြောနေလေရဲ့ ……. ၁၀ သိန်းပေးရမယ်တဲ့ ……. အင်တာနက်ကချစ် ဇာတ်လမ်းကို နင်ခွေးလွှတ်မှာလားကောင်မ ……. (၅၂၈) ကအေးမြတယ်လို့ဘူပြောလဲ သူလည်း ပူလောင်တာပဲ ……….. အတူတူပဲ ………
တီချင်း ရှိုနေဂျဒလယ် လား …
သများလည်း ရှိုမယ် ….
—— ထမိန်ကို လှန်ပီး … အဲ့လေ …တနေကုန်ထိုင်ပိး ဒဇိမ့်ဇိမ့် ကျိ …
နှဖူးက ခြေဖျား အထိကို အဟိအဟိ…
အိုဖက်စီးချင်တဲ့သူ ဖက်စီး ဆယ်သိန်းလဲပေးလေဘူးဟယ်….. အင်တာနက်ချစ်ဇာတ်လမ်းလဲတိဝူး နာတိတာ သူကြီးပေးမယ့်ပွိုင့်ပဲ…..ဟိဟိ….လာထား ၁၀
ဒီစာလေး ဖတ်ရင်း ကျနော့်အဖြစ်နဲ့ သွားတူတယ်ဗျာ ငယ်ငယ်က စိတ်ကစားပီး ပြောမိတာက ကျနော်။ကြီးလာတဲ့ အထိ တစိမ့်စိမ့်လှန်ကြည့်ပီး (ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေပြောတာပါ) ခံစားနေရတာလည်း ကျနော်ဘဲ ဒင်းကတော့ သူတို့ရုံးကကောင်နဲ့ ယူပြီး ခလေး၂ယောက်တောင် ရနေပြီ ပြီးသူကပြောသေးတယ် နင်နောက်တယ် ထင်လို့တဲ့ အရမ်းခံစားရတယ် ဂေ့…ဂလု….
တွယ်တာ တွယ်တာ တစ်ကယ်မညာ
အားပေးရင်း၊ဖတ်ရှုရင်း ကိုယ့်ဘဝအဖော်လေး ပုံဖော်မိပါတယ်
ဇာလေးရေ ……. အားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါနော် ……..
ကိုရဲစည် ……… စိတ်ညစ်ပြီး တရုတ်ပြည်ကိုလစ်သွားတာမှတ်လား အခုတော့ ကလေး (၂) နဲ့ ကျန်ခဲ့ရသူက အခိုင်ပါနော် ……… ကိုရဲစည်ရေ ယူနန်တုန်းကလာမနှုတ်ဆက်ဖြစ်ဘူး ညီမမှာ လည်းအိမ်ကိစ္စလေးတွေ လုံးပန်းနေရလို့ပါ နောက်တစ်ခုက Junction Zawana မှာတုန်းကလည်း အားနာပါတယ် ခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ……… နောင်ကြုံကြိုက်ရင် ထပ်ဆုံချင်ပါသေးတယ် …….. ပျော်ပျော်ပါးပါးပေ့ါ ……….
ညလေးရေ …… အမှန်ကို ချော့မွေ့တဲ့ခရီးကိုရောက်နေတဲ့ တွယ်တာလေးပါ …….
ကိုအတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ ……… အားပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်ရင် ဘ၀အဖော်အစစ်ကိုရှာတွေ့ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော် ……..
မမခိုင်ရေ………ပို့စ်ကိုရော/မန့်တာတွေကိုကြည့်ပြီး မှတ်သားနာယူလေ့လာဆည်းပူး အတွေးနယ်ချဲ့သွားပါကြောင်းနှင့်
အချစ်စစ် = အချစ် + စစ်